Liverpool ayaa bisha soo socda ku soo laaban doonta tababarka kooxdeeda waxaana jira tiro ciyaartoy ah kuwaas oo ay shaqo badani sugayso si ay iskugu muujiyaan kulamada saaxiibtinimo ee xili ciyaareedka ka hor.
Tababarayaasha kooxaha waa wayn ee kulamada saaxiibtinimo ka hela fursad fiican oo ay ku qiimeeyaan xaalada ciyaartoyda kooxahooda aan fursada ka soo helin, waxaana jira ilaa 10 xidig oo Klopp isha ku hayn doono.
Iyada oo Liverpool ay ka maqnaan doonaan Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Alisson Becker iyo Naby Kieta, waxaa jiri doona xidigo kale oo booskooda buuxin doona si ay Klopp ugu qasbaan in uu qorshihiisa xili ciyaareedka cusub ku darsado.
Waxa kale oo Liverpool laga fasaxay Daniel Sturridge iyo Alberto Moreno waana laba boos oo kale oo ka banaan kooxda kowaad si ay ciyaartoy Reds ka mid ahi Klopp ugu diidaan in uu suuqa kala iibsiga ku fikiro.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa tobanka ciyaartoy ee ku qasban in ay Jurgen Klopp iskugu muujiyaan kulamada saaxiibtinimo si ay fursad u heli karaan xili ciyaareedka cusub.
1-Nathaniel Clyne: Waxa uu ahaam ugu maqnaa kooxda Bournemouth oo uu bishii January ku biiray waxa uu doonayaa in uu helo booska difaaca midig laakiin taasi waxay hadda u muuqataa mid aanu ku riyoon karin.
Soo bixitaankii Trent Alexander-Arnold iyo in Joe Gomez uu difaaca midig iyo kan dhexe ka wada ciyaari karo ayaa dishay rajadii Clyne uu ku ahaa difaaca midig ee Liverpool kalida ku ahaa.
Iyada oo ayna suurtogal ahayn in Clyne uu difaaca midig kaga hor mari karo Trent Alexander-Arnold waxa uu kulamada saaxiibtinimo Clyne samayn karaa qaab ciyaareed fiican oo u Klopp ugu qasbi karo in uu doorashada labaad u ahaado ama uu xataa bandhigiisa ugu guulaysan karo in kooxi iibsato.
2-Dejan Lovren: Markasta xaaladiisa Liverpool waa mid muran keenta wuxuuna kala qaybiyaa aragtida taageerayaasha Liverpool sababtoo ah bandhiga fiican ee uu mararka qaar sameeyo iyo sida uu kulamada qaar u liito.
Lovern waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay suurtogalka tahay in Liverpool ay xagaagan iibin doonto, laakiin si uu Anfield u sii joogi karo waxa uu kulamada saaxiibtinimo samayn karaa bandhig uu Klopp ugu qancin karo in kooxda lagu sii hayo.
Sidoo kale bandhig fiican oo uu Lovern ka sameeyo kulamada saaxiibtinimo waxay caawin kartaa liverpool haddii ay doonayaan in ay iibiyaan oo qiimihiisa ayuu sare u qaadi karaa.
Riix 2,3,4 si aad xidigaha dagaalka ku jira oo dhan u ogaato.